Policies - Department of Research and Innovation (DRI)
Ministry of Science and Technology set the following Policies:-
1. To develop and to enrich the economy of the country by using the natural resources effectively
2. To support the national production by doing Research and Development in industries such as agriculture and aerospace for the development of National Economy and Social Welfares
3. To nature the human resources in advanced science and technology for the State
4. To upgrade the experiments on raw materials and value-added products, measurements on their properties, maintenance on QC (Quality Control) and setting the required norms and standards
5. To understand the know-how in Nuclear technology and to do the relative researches for practical use
6. To provide regional development by giving technical and vocational opportunities for the youth and by promoting the changes of learning science and technology
7. To produce the persons who are capable of initiating the new insights, innovative ideas and creative originality in science and technology
8. To upgrade such skilled workers as engineers, technologists and technicians who will need for cooperation and implementation of the world’s countries in accordance with the new millennium goals laid down by the United Nations.
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် ​အောက်ဖော်ပြပါ မူဝါဒများအား ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာစေရန်။
(ခ) အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် လယ်ယာ၊ စက်မှု၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာအစရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူ ပြုစေရန်။
(ဂ) နိုင်ငံတော်အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ပြုစု ပျိုးထောင်ရန်။
(ဃ) ကုန်ကြမ်းများ၊ ကုန်ချောများကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပေးခြင်း၊ ဂုဏ်သတ္တိများတိုင်းတာခြင်း၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းပေးခြင်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ် ပေးခြင်းများကို မြှင့်တင်ရန်။
(င) နျူကလီးယားနည်းပညာအား နားလည်တတ်မြောက်စေရန်နှင့် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရေး အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်။
(စ) ဒေသတွင်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိလာခြင်းဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်။
(ဆ) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းကြံဆမှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု လုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းဆောင် နိုင်သူများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်။
(ဇ) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသော ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်း ချက်များနှင့်အညီ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ပေါင်းစည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အချိန်တွင် လိုအပ် လာမည့် နည်းပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်ရန်။